Wararka - Astaamaha lagu keydiyo tamarta iyo bey'adda u fiican deegaanka ee lime
Astaamaha lagu keydiyo tamarta iyo bey'adda u fiican deegaanka ee lime
Foornada liinta ee toosan waxaa loola jeedaa aaladda lime calcining si loogu sii daayo clinker si joogto ah qaybta hoose ee quudinta sare. Waxay ka kooban tahay jir foornada qotonta, ku darida iyo sii deynta qalabka iyo qalabka hawo-siinta. foornada lime ee toosan waxaa loo qaybin karaa afarta nooc ee soosocda iyadoo loo eegayo shidaalka: coke oven foornada toosan, dhuxusha toosan, foornada toosan iyo gaaska toosan Faa'iidada foornada liinta ee toosan ayaa ah maalgashiga raasumaalka oo yar, meel dabaqa ka yar, waxtarka sare, isticmaalka shidaalka oo yaraada iyo hawlgal fudud.
Lime-ka ay shiday tamarta keydinta iyo nuuradda bey'adda u fiican ayaa kaliya tayo sare leh, laakiin sidoo kale aad ayey u badan tahay labis iyo xasilloon, leh nuurad aad u sarreeya iyo kaalshiyam wanaagsan. Maanta waxaan ka baran doonnaa astaamaha tamarta keydinta iyo nuuradda bey'adda u fiican.
1) Sababtoo ah maaddadu si isku mid ah ayey ugu soo duubtaa foornada liinta, waa mid sare oo ku jirta xaalad socod wanaagsan, taas oo damaanad qaadaysa shirkadaha sida warshadda birta si loo ballaariyo cabirka loona yareeyo qiimaha wax soo saarka.
2) Darajo sare oo otomaatig ah, nidaamka kontoroolka fog ah, dad yar ayaa ku shaqeyn kara khadka oo dhan.
3) Tayada wax soo saarka labiska.
4) Foornada lime ee taagan waa kalsiinis furan, habka wax soo saarka tiknoolajiyada sare, isticmaalka tamarta oo aad uga hooseeya qaabkii hore ee foornada nuuradda, waxayna u isticmaali kartaa gaaska qiiqa qiiqa qiiqa shidaal ahaan taas oo ah ilaalinta deegaanka.
5) Nidaamka otomaatiga ah iyo kan gacanta ayaa labaduba qalabaysan. Marka laga reebo hawlgalka gacanta ee sanduuqa hawlgalka goobta, dhammaantood waxaa lagu xakamayn karaa qalliinka kombuyuutarka qolka kontoroolka dhexe.
6) Xogta dhammaan aaladaha (sida cabbiraadda cadaadiska, mitirka qulqulka, qalabka heerkulka) ayaa lagu soo bandhigayaa kombuyuutarka waxaana daabacan kara daabacaha.
7) Siemens Buuxi Nidaamka Miisaanka Culeyska Maskaxeedka, Miisaanka iyo Nidaamka Magdhawga.
8) Astaamo lagu kalsoonaan karo oo liin dheriga lagu qiyaaso, sayid caqli badan iyo qalab kale oo lahaansho.
9) Nidaamka otomaatiga ah iyo kan gacanta ayaa labaduba qalabaysan. Marka laga reebo hawlgalka gacanta ee sanduuqa hawlgalka goobta, dhammaantood waxaa lagu xakamayn karaa qalliinka kombuyuutarka qolka kontoroolka dhexe.
Waqtiga dhejinta: May-25-2020
Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Kaalshiyamka Kaalshiyamka iyo Kaalshiyamka hydroxide, Qalabka Kaalsiyam Hydrokside, Sameynta Kaalshiyamka Hydroxide, Magaca Ganacsiga ee Kaalshiyamka Kaalshiyamka, Qalabka Khadka Kaalsiyam Hydrokside Line,